2021..Maalintii Waxa ay Ka Yaraan Doontaa 24 Saac! | Xaqiiqonews
2021..Maalintii Waxa ay Ka Yaraan Doontaa 24 Saac!
Sida ay ku warameyso Jariidada “Daily mail” waqtiga waxa uu ku socdaa xawaare ka badan intii uu ahaa nus qarnigii tagay, madaama wareegga dhulka uu xawaareeyey si ka badan intii hore, taasi oo keeneysa in maalinta ay wax yar ka yaraato 24-kii saac ee caadiga ahaa.
Saameynta noocan ah ayaa sii socon doonto sanadkani bilowga ah, waqti xiddigeedka is bad badala iyo waqtiga saacad atameedka sugan ayuu u dhaxeyn doonaa farqi ah 19 mili-ilbiriqsi (milli-socond).
Celcelis ahaan sanadkani 2021 waxa la filayaa in 0.05 mili-ilbiriqsi uu ka yaraado intii uu caadiyan ahaan jiray ee 86,400 ilbiriqsi ee 24 saac sameyn jirtay.
Tan iyo bilowgii qarnigii 21, aad waqtiga waxa uu u muuqdaa in uu soo yaraanaayo, haddaba sababtu maxay tahay?
Xaqiiqadu waa : Dhulka Ayaa Bilaabay in uu Xawaareeyo
Saynisyahanada ayaa aaminsan uu dag daga wareegga dhulka uu sababay in dhulka uu sameeyo wareeg dhameystiran wax ka yar 24 saac, taasi oo ku duwan sida uu ahaa wareegga dhulka 50 sano ka hor.
July 19, 2020 ayaa noqotay maalintiii ugu yareyd tan iyo markii saynisyahanada ay bilaabeen in ay diwaan geliyaan wareegga dhulka 1960, iyadoo maalintaasi ay ka yareyd 1.4605 milil-ilbiriqsi 24-ka saac ee caadiga ah.
Saynisyahanada ayaana saadaalinaya in xawaaraha sare ee wareegga dhulka uu sababi karo isbadal waqtiyeed hadii sidan uu ku sii socdo.